E guzobere ụlọ ọrụ anyị na 2005 na isi ụlọ ọrụ dị na shijiazhuang nke bụ ebe mara mma nke China. Isi azụmaahịa ahụ gụnyere mmepụta na ire nke kemịkal kemịkalụ na nnụnụ ọkụ na-eri ngwaahịa sitere na ngwaahịa, yana mbupụ nke teknụzụ chlorine dioxide. Anyị ụlọ ọrụ, aiming na otu ebe ọrụ na-adigide mmepe, mgbe niile na-ekwusi ike na okwukwe gbakwasara iji wuo ezi ụlọ ọrụ ika na iji merie ahịa na ndị ahịa na ezi ngwaahịa mma na unreserve ọrụ.
Ime ihe n'eziokwu bụ ntọala
Companylọ ọrụ ahụ na-agbaso ụkpụrụ nke ezigbo okwukwe
Meri ahịa na ndị ahịa nwere ngwaahịa dị elu.
Ọrụ ndị ọkachamara
Nweta ntụkwasị obi gị na nkwado gị site na iji ezi obi na ọrụ na ngwaahịa dị mma
Mmetụta nke nje covid-19 na NBR latex
NBR latex na-egosipụta ihe ndị magburu onwe ha dị ka iguzogide mmanụ na ọgwụ ndị ọzọ nke na-eme ka ha bụrụ ihe a na-achọsi ike n'ichebe ihe nchebe karịsịa gloves maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ahụike. A na-atụ anya ịbanye na-eto eto a iji mepụta ohere zuru oke na nit ...
Chlorine dioxide (ClO2) bu odo odo-nwere odo odo nwere onwu yiri nke chlorine nwere ezigbo nkesa, ikike ịbanye na igba ogwu n'ihi oke ikuku ya. Ọ bụ ezie na chlorine dioxide nwere chlorine na aha ya, ihe onwunwe ya dị nnọọ iche, dị ka carbon dioxide dị iche ...
Nabata na FIZA TECHNOLOGY
HEBEI FIZA TECHNOLOGY CO., LTD bụ igwe nrụpụta kemịkal zuru ezu na soplaya. Anyị nwere ọkachamara na mmepụta na mbupụ nke kemịkalụ nke a na-eji maka ọtụtụ ngwa dị na ndepụta, fatịlaịza, nri, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ọgwụgwọ mmiri, dị ka sodium chlorite, chlorine d ...